I-Tunquen, indawo yokuphumla kunye nokuphumla - I-Airbnb
I-Tunquen, indawo yokuphumla kunye nokuphumla
Iyure enesiqingatha ukusuka eSantiago kwingingqi yaseValparaiso, iTunquen ikhona. Indawo entle enemozulu engakholelekiyo yeMeditera, inokuwonwabela amaphandle kunye nolwandle. Yeyona ndawo ifanelekileyo yokuqhawula esixekweni, yonwabele indalo kwaye uphumle
Le ndlu yakhiwe ngamaplanga iyenza ikhululeke kwaye ivumelane nendalo. Umbane ufunyenwe kumandla e-photovoltaic kunye namanzi ukusuka kwi-shaft enzulu. Ifakwe kwisiqwenga somhlaba ojikeleze i-5000m^2, ijikelezwe yimekobume ye-rustic enomoya ojonga ulwandle kunye noLwandlekazi lwePasifiki.
Ungenza ntoni eTunquen? Relax, thatha uhambo olude, yiya elunxwemeni, ujonge isibhakabhaka esihle, ukhwele ibhayisekile, kwaye uthande iintyatyambo ezikhethekileyo kunye nezilwanyana. Ngaphandle koko unokutyelela indlela yeembongi zaseChile kwi-litoral Central, indlela yewayini eValle Casablanca, ichweba laseValparaiso, isixeko segadi eyaziwa ngokuba yiViña del mar kunye nokunye okuninzi.
Isakhiwo sibekwe kwindawo yasemaphandleni kunye nonxweme, apho unokonwabela imimandla yasemaphandleni kunye nolwandle. Kunye nezityalo ezityebileyo zemveli kunye nezilwanyana, inomgxobhozo onguvimba wesizwe.
Ungenza ntoni eTunquén?
Relax, uhambe, uye elunxwemeni, ujabulele isibhakabhaka esicacileyo kunye neenkwenkwezi, ukukhwela ibhayisekile, imidlalo, imililo yenkampu.
Unokutyelela indlela yeembongi zaseChile kunxweme oluphakathi, indlela yewayini kwintlambo yaseCasablanca, ichweba laseValparaiso, namhlanje inkcubeko yenkcubeko yoluntu, isixeko sasegadi yaseVina del Mar kunye nabanye. Zonke ezi ndawo zikufutshane kakhulu eTunquen, imizuzu engama-30 ngemoto malunga.
Ungafowunela kulo lonke ixesha lokuhlala kubanini bendlu, kwaye kuya kubakho iiyure ezingama-24 ngosuku olukhoyo eTunquén abasebenzi abangabahlali abakhoyo.